फिफा वरियतामा नेपाली फुटबलले गर्यो यस्तो ठूलो सुधार ! हेर्नुहोस् कुन देश पर्यो वरियताको पहिलो नम्बरमा !
एजेन्सी – विश्व फुटबल महासंघ फिफाको बरियातामा नेपालले ३ स्थान सुधार गर्दै १६१ औं स्थानमा पुगेको छ । फिफाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ बरियाता अनुसार नेपाल यसअघिको आफ्नो वरियतामा तिन स्थान सुधार गरेको हो। यद्यपी नेपाल दक्षिण एशियामा भारत, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान पछि चौथो स्थानमा यथावत छ । आगामी साता रसियामा सुरू हुने फिफा विश्वकप फुटबल अगाडि फिफाले बरियाता सार्वजनीक गरेको हो ।
दक्षिण एशियामा भारत ९७औं स्थानमा यथावत रहँदा दुई स्थान तल खस्केको माल्दिभ्स १५० औं र पाँच स्थान तल खसेको अफगानिस्तान १४५औं स्थानमा छ। एक स्थान सुधार गर्दै भुटान १८३ औं स्थानमा छ ।
बरियातामा नेपालभन्दा पछाडि रहेका दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा बंगलादेश १९४ , श्रीलंका २०० र पाकिस्तान २०१औं स्थानमा छन्।
पछिल्लो वरियाताको शीर्ष १० स्थानमा कुनै परिवर्तन भएको छ। पहिलो स्थानमा जर्मनी यथावत छ। यस्तै ब्राजिल, बेल्जियम, पोर्चुगल, अर्जेन्टिना, स्वीट्जरल्याण्ड, पोल्याण्ड, चिली , स्पेन २ देखि दशौं स्थानमा रहेका छन्।
प्रकाशित : शुक्रबार, जेठ २५, २०७५१०:४७